एमालेको भातृसंस्था युवासंघको कार्यकर्ता भेला आज सकिदै
झापा , माघ १। नेकपा एमालेको भातृसंस्था युवासंघ नेपालको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला झापाकम आज समापन हुँदैछ । संघका पदाधिकारीले पेस गरेका आर्थिक, राजनीतिक तथा सांगठनिक
बारीको कान्लामा लुकाएर राखिएको अबस्थामा गाँजा बरामत
मकवानपुर, माघ १। मकवानपुरको टिस्टुङ गाविसमा बारीको कान्लामा लुकाइराखेको अवस्थामा गाँजाको ठुलोपरिमाणमा प्रहरीले बरामद गरेको छ। बरामद गरिएको गाँजा १५ सयदेखि २ हजार किलोग्रामसम्म हुनसक्ने खानीखोला
देशभर पूजापाठ गर्दे माघीपर्व आज मनाईदै
काठमाडौं,माघ १। आज माघ १ गते अर्थात माघे संक्रान्ति । आज देशभरको नदी, दोभान तथा त्रिवेणीमा स्नान र देव मन्दिरहरुमा पूजापाठ गर्नुका साथै घिउ–चाकु, तिलको लड्डु र
करिव पौने ३ अर्व रुपैयाँ बराबरको अनुदान
काठमाडौं, पुस ३० । चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भ्रमणका क्रममा करिव पौने ३ अर्व रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोगमा गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । चिनियाँ समकक्षी जियाबाओ
लुम्विनी भ्रमण वर्ष उद्घाटन हुँदै
काठमाडौं, पुस ३० लुम्विनी भ्रमण वर्षको औपचारिक उद्घाटन आज गरिने भएको छ । विश्व शान्तिका लागि लुम्विनी भ्रमण भन्ने नाराका साथ सन् २०१२ लाई लुम्विनी भ्रमण वर्षको
Date : 13 Jan 2012
शुरु भयो आजदेखि म्याग्दी महोत्सव
म्याग्दी, पुस २९। म्याग्दीको बेनी बजारमा आजदेखि म्याग्दी महोत्सव शुरु भएको छ । महोत्सवको उद्घाट्न गर्नु अघि विभिन्न जातीय भेषभूषामा सजिएका झाँकीसहितको जुलुसले बजार परिक्रमा गरेहेको
बढ्यो लोडसेडिङ माघ २ गतेदेखि दैनिक १४ घण्टा
काठमाडौं, पुस २९। नदीहरुमा पानीको सतह घटेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फेरि माघ २ गतेदेखि दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने बताएको छ । दैनिक ११ घण्टा
सुकुम्वासी छानविनकार्य शुरु, माघको दोस्रो साताबाट बस्ती हटाईने
काठमाडौं,पुस२९। सरकारले वास्तवीक सुकुम्वासी हो कि होईनन् भनेर आज देखि छानविनकार्य शुरु गरेको बताएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको काठमाडौ डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना
बर्दिवास वजार पुर्ण रुपमा बन्द
बर्दिवास, पुस ३० । जनकपुरको आन्दोलनका कारण आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सेवा केन्द्र वर्दिवासमा स्थापनाको माग गर्ने सरकारी निर्णय परिवर्तनपछि बर्दिवास एक्कासी तातेको छ । विहानैदेखि
राजधानीमा अपराधिक गतिविधि बढेको भन्दै, आजदेखि पन्ध्र दिने बिशेष सुरक्षा अभियान
काठमाडौं,पुस २९। महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयले राजधानीमा अपराधिक गतिविधि बढेको भन्दै राजधानीमा आजदेखि प्रहरीको पन्ध्र दिने बिशेष सुरक्षा अभियान शुरु गरेको छ । अपराधिक गतिविधि
शीर्षदलका नेताहरु उपस्थित नभएपछि संवैधानिक समितिको बैठक स्थगीत
काठमाडौं,पुस २८। माओवादी र एमालेका शीर्ष नेता अनुपस्थित रहेपछि संवैधानिक समितिको बैठक औपचारिकतामा सिमित भएको छ । उपसमितिले गरेको सहमतिहरु अनुमोदनका लागि बिहीबार बसेको समिति बैठक पनि
स्ववियु निर्वाचनबारे छलफल गर्न १३ विद्यार्थी संगठनको बैठक
काठमाडौं,पुस २८। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनबारे छलफल गर्न १३ विद्यार्थी संगठनको बैठक आज बस्दैछ । अनेरास्ववियुको कार्यालयमा मध्यान्ह बस्ने बैठकमा निर्वाचन प्रणालीबारे सहमतिको प्रयास हुने बताइएको छ
लेखनाथ महोत्सव सुरु हुँदै, १५ करोडको आर्थिक कारोवार हुने अनुमान
पोखरा, पुस २८ । सात तालको बगैंचा कास्कीको लेखनाथमा आजदेखि आठौं लेखनाथ महोत्सव सुरु हुँदैछ । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा हुने महोत्सवको स्थानीय विकास मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले उद्घाटन
तीन दिनदेखि जाजरकोट बन्द
जाजरकोट, पुष २८ । यातायात ब्यवसायीहरुको सिण्डिकेटका विरुद्ध तीन दिनदेखि संघर्षमा उत्रिएका जाजरकोटका विद्यार्थीको आन्दोलनमा विभिन्न पेशागत संगठनहरुले पनि समर्थन गरेका छन् । जाजरकोटमा रहेका भेरी गंगा र
आज पनि जनकपुर बन्द
जनकपुर, पुस २८ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय महोत्तरीको बर्दिवास सार्ने निर्णयको विरोधमा आज पनि जनकपुर बन्द गरिएको छ । बन्दका कारण सवारी साधनको चहलपहल कम छ भने बजार,
प्रहरीमा जागिर लगाईदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ
झापा, पुष २८ । प्रहरीमा जागिर लगाईदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुईजना मोरङमा पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा मोरङ हात्तिमुढाकी संयूक्ता चौधरी र कटहरीका रन्जीत पौद्दार
प्रचण्डको सहमती दस्तावेज देखेपछि, माओवादीमा फेरि विवाद बल्झीयो
काठमाडौं,पुस २८। एकिकृत माओवादीभित्र मिलिसकेको कुरा प्रचण्डको सहमती दस्तावेज पछि फेरी विवाद बल्झीएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बनाएको सहमतीको दस्तावेजमा वैद्य पक्षले आपत्ति जनाएको
दलका सचेतकहरु र सांसदहरुले प्रयोग गरेको गाडीहरु फिर्ता गरिने : सभामुख
काठमाडौं,पुस २८। सरकारले आफ्नो पालामा दलका सचेतकहरु र सांसदहरुलाई दिएको सुबिधा कानुनविपरित ठहरगरि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन पनि अटेर गर्दै बसेका बिभिन्न दलका सचेतकहरु र
धनुषा, पुस २७ । काठमाडौंबाट जनकपुर आउदै गरेको ना. ३ ख ६०५५ नम्बरको भाडाकर पञ्चमुखी भिडियोकोच बसले किचेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु
काठमाडौं,पुस २८। हिजो भएको कार्यक्रममा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित हुने संबैधानिक राष्ट्रपति सहितको मिश्रित ब्यवस्था उपयूक्त हुनेदावी गर्दै संसदीय
दाङ,पुस २७। रक्सी खाएर घरमा जहिलै झगडा गर्न भन्दै दाङ बिजौरीमा श्रीमतिद्धारा श्रीमान्को हत्या भएको छ । बजौरी गा.वि.स. ७ स्थीत् ३२ बर्षको बाग्दल चौधरीलाई
पर्टी भित्रको द्धन्द्धले शान्ति र संविधान अगाडी नवढेको : डा. लोहनी
काठमाडौं,पुस २७। राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सह अध्यक्ष डा प्रकासचन्द्र लोहनीले दलहरुवीच राष्ट्रपतिप्रत्यक्ष वा निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित हुने भन्नेमा मात्रै विवाद रहेकोले कार्यदलले सुझाव दिएको मिश्रित प्रणालीमै
संसदीय ब्यवस्थाका बिकृति हटाएर शासन पद्धति जानु पर्नेजोड : अध्यक्ष केसी
काठमाडौं,पुस २७। राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय पद्धतिमा पनि संसद खरिद विक्रीहुने र निरकुशत हुने भन्दै अहिलेसम्म प्रयोग गदै आएको संसदीय ब्यवस्थाका बिकृति
अमेरिकाको एट्लान्टास्थित एक नेपालीको गोली हानी हत्या
अमेरिका, पुस २७ । अमेरिकाको एट्लान्टास्थित डेकाटुरको ग्यास स्टेशनमा एक नेपालीको गोली हानी हत्या भएको छ । हत्या हुनेमा नेपाली दामोदर पाठक रहेका छन् । ड्युटीमा
पूर्वी थारुवान संघर्ष समितिद्वारा कोचिला राज्यको माग गर्दै पूर्वका ६ जिल्ला बन्द
इटहरी, पुस २७ । पूर्वी थारुवान संघर्ष समितिद्वारा कोचिला राज्यको माग गर्दै पूर्वका ६ वटा जिल्ला आजदेखि तीन दिन बन्दको आह्वान गरेको छ । बन्दका कारण
बैद्य पक्षलाई सरकारमा ल्याउन माओवादी भित्र छलफल तिब्र
काठमाडौं, पुस २७ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आज माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरी मोहन बैद्य पक्षलाई सरकारमा ल्याउने उपायबारे छलफल गरेका छन् । माओवादीका
खै त अनुगमन? निशुल्क भन्दै विरामीलाई म्याद गुज्रिएको औषधी वितरण
ईटहरी, पुस २७। सरकारले क्षयरोग नियन्त्रण गर्नलाई निशुल्क औषधी बितरण गर्न योजना ल्याएर निशुल्क औषधी बितरण गर्नेक्रममा इटहरीस्थीत् प्रथामीक स्वास्थ्यकेन्द्रबाट म्याद सकिएको औषधी फेलापरेको छ । विरामीलाई
अवैध डलररहित पक्राउ परेको चिनियाँ नागरिकलाई अदालतबाटै भगाउने प्रायस, बयान लिन शुरु
काठमाडौं, पुस २७ । अवैध डलर करोबारमा संलग्नमा पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकहरु जिल्ला अदालतबाट भगाउने प्रायस भएको अनुशन्धाको क्रममा खुलेको छ । उनिहरुलाई भक्तपुर प्रहरीले
आज २९०औं पृथ्वी जयन्ती, विविध कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाईदै
काठमाडौ, पुस २७ । आज २९०औं पृथ्वी जयन्ती । पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मूल आयोजक समितिले आज ११ बजे सिंहदरबार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा
राजधानीमा झण्डै ४० हजार बालश्रमिक
काठमाडौं, पुष २६ । पुस महिनाको कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा मैलो र च्यातिएको लुगा लगाएर फटाफट प्लेट उठाएर टेबल सफा गरिरहेका उनी भन्दै थिए, दिनभर ग्राहकका लागि खाना
Pages 132 : You are at page 91 of 132